4 qalab oo aad ku abuuri karto qaab qoraal kuu gaar ah | Abuurista khadka tooska ah
Samee qaab kuu gaar ah sidoo kale waxay noqon kartaa sumad aqoonsi oo kaaga soocda kuwa kale iyo adduunkan naqshadeynta iyo farshaxanka waa wax ku dhow lagama maarmaan in la muujiyo. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in in badan oo naqshadeeyayaashu ay diyaar u yihiin inay abuuraan xarfaha si ay isugu dayaan inay helaan xoogaa lacag ah ama xitaa madadaalo naftiisa ah.
Nidaamkan waa la wanaajiyay sababtoo ah qulqulka qalabka cusub ee suuqa taasi waxay fududeyneysaa abuuritaanka noocyada noocyada noocyada kala duwan ah. Hoos waxaad ka heli doontaa aaladaha ugu wanaagsan ee lagu abuuri karo qoraalkaaga oo leh qalab tafatir oo weyn.
Nidaamka laftiisa sameynta font cusub waa mid aad u dhib badan, maaddaama awoodahaaga farshaxanimo ay halkan ku yimaadeen. Qaabka xarfaha ayaa loo sawiray ama loo tafatiray, xogta ayaa loo galay si loo sameeyo in ishaadu si sax ah u shaqeyso Dhamaan meheradaha, waxaad xaqiijineysaa in xitaa daabacaadda ay u egtahay dhammaantoodna ugu dambeyntii u dhoofiso qaabab feyl ah.
In laga caawiyo hawshan oo dhan waxaa jira afar tafatirayaal font oo la heli karo sida: FontLab Studio, Fontographer, Glyphs iyo Robofont.
2 Sawir qaade
3 Glyphs iyo Robofont
Labadan tafatire ayaa leh waxay ahaayeen qalabkii ugu muhiimsanaa in muddo ah berrinkan. In kasta oo ay durba jiraan ikhtiyaarro aad u xiiso badan, haddana wax walba way siiyaan maxaa yeelay waxaa jira nashqadeeyayaal iyo shirkado shaqadooda ku saleysan.
Awood badan ku filan si loo abuuro noocyo tayo sare leh waxayna ka shaqeeyaan labada OS X iyo Windows labadaba.
Isticmaalka FontLab wax walba waad dib u hagaajin kartaa laga bilaabo sifooyinka sida OpenType ilaa TrueType. Fontlab waxay u badan tahay inuu yahay aaladda ugu qaabeynta qaabeynta xilligan. Iyo, bilow ah waxay noqon kartaa mid aad u jahwareersan oo leh interface wax yar oo taariikhi ah marka la barbar dhigo tifaftirayaasha kale ee casriga ah.
Sawir qaadaha ayaa noqon kara qalabka ugu fiican ee naqshadeeyaha layliska ama naqshadeeye dijitaal ah. Iskuxirkiisu wuu ka sii raaxeysan yahay, aaladaha lagama maarmaanka ahna waxaa lagu soo daray magacaabista ilaha si fudud loo heli karo.
Waa in la sheegaa in Fontrographer ma laha qaar ka mid ah astaamaha horumarsan in haddii aad leedahay FontLab, sidee bay u noqon kartaa in muuqaalka OpenType uusan jirin.
Glyphs iyo Robofont
Kombiyuutarrada Desktop-ka ayaa guuleystay sii deyso far qorista oo ka dhig mid ay heli karaan qof walba. Glyphs iyo Robofont waxaa loo tixgelin karaa inay yihiin aaladaha casriga ah ee nashqadeeyayaasha nooca.
Labada qalabba way leeyihiin interface ah oo soo jiita dareenka Waxaana haddaba jira dad badan oo naqshadeeyayaal ah oo markii hore diidanaa inay si dhab ah u qaataan. Labaduba way isbedelayaan waxayna horeba u leeyihiin bulsho u heellan isticmaalayaasha iyo horumariyeyaasha.
Noocyada ugu dambeeyay way fududahay in la barto iyo awood u leh soo saarida noocyo tayo sare leh. Labaduba waxay taageeraan qaabka caanka ah ee UFO.
Glyphs ayaa leh u rogay geeddi-socodka abuuritaanka font-ka wax xiiso leh oo leh isdhexgal isku dhafan oo loogu talagalay sawirka iyo tifaftirka. Waxay si otomaatig ah u abuuri kartaa astaamaha OpenType iyo xitaa qoraallo murugsan sida Carabiga.
Glyphs waa barnaamij la adeegsan karaa iyadoo la adeegsanayo Python, iyo ku darista astaamaha cusub waa wax fudud. Tusaale cad oo ah waxa la samayn karo waa furitaanka, wax ka beddelka iyo dhoofinta farta OTF iyo in wax walba la ilaaliyo iyadoon loo baahnayn aqoon farsamo oo ku saabsan farta.
Iyo, in kasta oo Glyphs uu yahay tifaftire horay loo sii qeexay, RoboFont waa tifaftire aad u fara badan oo ku qoran Python. Waxay u ogolaataa si buuxda u astaysto aad interface iyo qaab dhismeed si ay isticmaaleyaashu u abuuri karaan xalal u gaar ah marka loo eego mashruuca ay ku dhex jiraan.
Glyphs iyo Robofont ma lahan dhammaan waxqabadka labadi hore, laakiin si dhakhso leh ayey isu beddelayaan, iyagoo curyaan ah aan ka shaqeynayn Windows oo waxay ku sameeyaan oo keliya Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Qalabka ugu wanaagsan ee lagu abuuri karo qoraalkaaga